Rukia Kuchiki GDM Mawduuca Arch Linux | Laga soo bilaabo Linux
Rukia Kuchiki GDM Mawduuca loogu talagalay Arch Linux
Courage | | Muuqaal / Shakhsiyeyn
Maanta waxaan raadinayay waxyaabo Gnome Fiiri oo waxaan helay mawduuc GDM ah Rukia kuchiki oo waxaan go'aansaday inaan wax ka beddelo
Arrinta laga hadlayo ayaa ahayd Carlitos RukIte. Mawduucani wuxuu lahaa cilad muhiim ah taasna waxay tahay inuu leeyahay magaca qof ku qoran Jabbaan sidaa darteed waan ka saaray oo waxaan ku daray astaanta Arch Linux, oo u eg sidan:
Waxaan sidoo kale u sameyn doonaa waxyaabo badan oo disros ah laakiin marka hore waxaan jeclaan lahaa qof inuu tijaabiyo si uu u arko inuu shaqeynayo iyo in kale, kaliya waxaan rakibay Slim oo waan ka saaray GDM, markaa ma tijaabin karo.
Waad soo dejisan kartaa halkan ka
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Rukia Kuchiki GDM Mawduuca loogu talagalay Arch Linux
Khaladkeyga, waxaan u qaatay wax iska caadi ah in qof walbaa garanayo sida loo rakibo markaa waan dhihi doonaa hadda.
Si loo rakibo, waxaa laga sameyn karaa Nidaamka -> Daaqadda gelitaanka ee isticmaala Gnome
Waxaa jira wax aanan fahmin:
1- avatarkaagu naag maahan? Mmmm waxaa laga yaabaa inay tahay da'dayda, laakiin kaalay, wiil gabar avatar wata .. Yaab yaab leh ..
Hahahaha .. By the way, Archlinux wuxuu leeyahay xirmo mowduucyo loogu talagalay Slim, halkaasoo isla kan aad hadda dhigto uu ka yimid. Labada maalmood ee aan isticmaalo Arch waan ku haystay.
Avatarkaagu naag maahan? Mmmm waxaa laga yaabaa inay tahay da'dayda, laakiin kaalay, wiil gabar avatar wata .. Yaab yaab leh ..
Nacalad maahan markii ugu horreysay ee aan isticmaalo astaamo dumar ah sida ragga badani sameeyaan, Mierdofu $ sidoo kale way sameysay. Macno malahan, waxaan leeyahay
Laakiin tani waa GDM, Sikastaba waxaad iigu soo diri kartaa boostada iyo habka aad iigu sheegto sida aan u rakibo taas wax fikrad ah kama haayo Slim hahahaha
Waxay i siineysaa walaac aad u weyn Geesinimo, anigu ma fahmin, waxaa lagu cadeeyay inay tahay cadowga haweenka waxayna adeegsataa avatar dumar ah. Way suurto gal noqon doontaa in si tartiib tartiib ah loo caddeeyo haddii ay suurta gal tahayna u sawir si aad u fahamto, HAHAHAHA.
Ninku waa aniga oo arkaya waxa ku dhacaya sodohda soddohda, KZKG ^ Gaara intee in le'eg ayay saaxiibbadiis soconayaan, yaraanta dumarka dhaadheer, furiinka, iwm oo aadan rabin inaad wax sameyso HAHAHA.
Sikastaba Rukia Kuchiki mararka qaar waxay i xasuusisaa naftayda markii aan yaraa martidaas xun gaar ahaan cutubyada ugu horeeya
Waad saxan tahay, waxaan qabaneynaa Symposium dhakhaatiirta maskaxda, cilmu-nafsiga iyo cilmiga jinsiga si aan isugu dayno caawinta lamaanayaasha, hehehehehehe.
Waxa aad jeceshahay hubaal waa bunniyada aan sawiray markii aan lahaa inaan wax u sharaxo Ichigo HAHAHAHAHAHA
Haddii aan isticmaali lahaa Arch waxaa laygu dhiirigelin lahaa inaan isticmaalo!
Waa maxay dawada aad isticmaasho? Waa in laga dhigo mid ka mid ah qalabkaaga wax lagu dhejiyo
Waqtigan xaadirka ah waxaan la socdaa LMDE, in kasta oo Arch uu dareenkeyga soo jiito ... laakiin ma hubo haddii aan beddelka sameyn doono. Sidoo kale, waxaan u baahanahay dirawal adag oo la qaadan karo si aan u keydiyo dhammaan dukumiintiyada aan haysto, taas oo ah kumbuyuutarka aan ku keydiyo dhammaan faylasha jaamacadda!
Aniga iyo Elav waxaan halkaan kuqoran casharro Arch Linux ah, sikastaba ha noqotee hadaad isticmaasho Gnome waxaan hayaa mid ka mid ah KahelOS halkaas si aan si dhaqso leh ugu rakibo, ArchBang waxaa kajira mid aan leeyahay oo kujira UL
Arch wuxuu umuuqdaa mid igu adag aniga ... uguyaraan inaan kubilaabo. Waxaan bilaabay adeegsiga Linux 2 sano ka hor, Linux Mint, hadana waxaan u wareegay Debian, in kastoo aan horay Ubuntu horay u aqaanay, hadana Arch wuxuu fiirsanayaa dareenkeyga sababo la xiriira qoraalada aad qortay (DAMN! Waxaad dooneysaa inaad maskaxda iga dhaqdo! XD ) ... iyo Elav, oo aniga oo kale ah Debianite aniga oo kale ah, ayaa dhinac isu rogay ...
Ma aqaano waxa aan sameyn doono, laakiin dhamaadka waxaan go'aansaday inaan bedelo, waxaan horey u aqriyay casharrada ku saabsan sida loo rakibo, waan isku dayi karaa inaan rakibo, inkasta oo kahor intaanan isku dayi doonin mashiin dalwad ah, waa haddii ...
Miyuu elav beddelay dhinacyadii? Waxba kama jiraan taas, elav wali wuxuu ku jiraa Debian, Arch wuxuu ahaa 2 maalmood oo keliya 😀
Mawduuca aad ayuu u wanaagsan yahay, runti ma jeclaan laheyd inaad sameysid cashar ku saabsan sida loo sameeyo mid ka mid ah? Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo sameeyo si ay aniga iga dhigto mid.
Ku jawaab KalEl1285
Saxiix, waxaan sameeyaa casharradaas maanta. Laakiin ha ixtiraam yar u lahayn wax ka beddelka heesaha maxaa yeelay xitaa nin qaba Down Syndrome ayaa sameeya
Waxaan u maleynayaa in iskuxirka soo dejintu uu dhacay sababtoo ah ma soo dejisan karo, waan ku qanacsanahay haddii aad mar kale soo rogi karto si aad ugu tijaabiso qaanso.
Waxaan u dirayaa iskuxiraha maamulayaasha si ay kuu siiyaan, hada mudo kadib waan sameyn doonaa
Kaftan: 33 weedho geek ah oo jacayl lagu jeclaado